सिल्टल डिजिटल विशेषज्ञ बताउँछ कि 404 त्रुटि एसईओ को लागि मतलब छ
कुन कारणले 404 त्रुटि पाइएन? के तिनीहरू मेरो रैंकिंगमा जोगाउन जाँदैछन्?यी प्रश्नहरूले ब्रान्ड प्रबन्धकहरूलाई दिमागमा राख्दा "404 फेला परेन" त्रुटिहरू आउँदैनन्।
जब तपाईंको पृष्ठले 404 त्रुटिहरू फर्काउँछ, अवरोधहरू धम्की दिन्छन्UX (प्रयोगकर्ता अनुभव)। हरेक पटक एक आगन्तुक त्रुटि 404 हुन्छ, त्यो पुन: पुनः र ब्याकट्र्याक गर्न बाध्य हुन्छतपाइँको पृष्ठ छोडेर मतलब छ। ब्रान्ड प्रबन्धकहरू वा डिजिटल मार्केटहरूका लागि, त्रुटिहरूले उनीहरूलाई देखा पर्दा त्रुटिको कारण बनाउँछवेबमास्टर उपकरणहरू। यी समस्याहरूबाट बच्न ग्राहक ग्राहक प्रबन्धक माइकल ब्राउन सेमील्ट डिजिटल सेवाहरु,व्यापक समीक्षा को 404 त्रुटिहरु तपाईंको एसईओ को कसरि मतलब छ र कसरि उनको अवांछनीय प्रभाव को खत्म गर्न को लागि।
404 त्रुटिहरु को कसरि खोज्नुहोस?
Google वेबमास्टर उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यो सबैभन्दा राम्रो तरिका होगुगलबाट त्रुटिहरू पत्ता लगाउँदै। तपाईले मात्र आफ्नो वेबमास्टर उपकरणहरूमा लग इन गर्नु आवश्यक छ, क्रलमा जानुहोस् र क्लिक गर्नुहोस्क्रल त्रुटियाँ। सबै हराएको URL हरू फेला परेनन भागमा। तपाईं पनि को ग्राफ मा जाँच गर्न सक्नुहुन्छराम्रो विश्लेषण को लागि समय संग त्रुटिहरु।
टूटीएको लिंक खोजकर्ता
आज, त्यहाँ धेरै ब्राउजर एक्सटेन्सनहरू र यहाँ सम्मका निःशुल्क छन्वेबसाइटहरु Validator.w3org को रूपमा र मेरो लिंक जाँच गर्नुहोस्। यो सजिलै संग आफ्नो वेबसाइट मा टूटी हुई लिंक को पहिचान हुनेछ।
चिल्लाउने माढक एसईओ स्पाइडर प्रयोग गर्दै
वेबमास्टर उपकरणहरू जस्तै, एसईओ स्पाइडरले तपाईंलाई सबै 404 फेला परेन भनेर त्रुटिहरू देख्न मद्दत गर्दछ।अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्। एसईओ स्पाइडर स्थापना गर्नुहोस् र आफ्नो वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि क्रल क्लिक गर्नुहोस्। स्थितिमा 404 त्रुटिहरू देखा पर्नेछन्कोड ट्याब.तपाईं पनि एक .csv फाइलको रूपमा रिपोर्ट निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ।
कुन 404 त्रुटि एसईओ को लागी मतलब छ र तपाईं किन तुरुन्तै कार्य गर्न आवश्यक छ?
Google ले कृतज्ञता पाएको छ कि 404 भेटिएका त्रुटिहरू अपरिहार्य छन्।यसकारण, तपाइँको वेबसाइट मे-अनुक्रमित वा दण्डित हुनेछैन। यद्यपि, किनभने Google को मुख्य फोकस गुणस्तर प्रदान गर्दैछ,तपाईंको एसईओ धेरै पीडित हुन सम्भव छ। Google बट्स तपाईंको पृष्ठको आन्तरिक लिङ्कहरू क्रल गर्न, तपाइँलाई पार्टीको रूपमा चिन्ह लगाईनेछराम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न रुचि छैन। समयको बेला, Google ले तपाइँको पृष्ठहरू क्रल गर्न रोक्दछ र यातायातलाई निकै कम हुनेछ।
बजारको प्रतिक्रियाको बारेमा मार्केटर्सहरू अधिक चिन्तित हुनुपर्छग्राहकहरू Google बटहरूको सट्टा। तपाईंको आगन्तुकहरूमा, त्रुटिको कारण सबैमा महत्त्वपूर्ण छैन, जुन तिनीहरू चासो राख्छन्उनीहरूले चाहने सामग्री पाइरहेको छ। प्रायः प्रायः पर्यटकहरू फरक वेबसाइटमा छाड्छन्, एक प्रतियोगी वा बाहिर निस्कनुहोस्। योट्राफिकको हानि भनेको कारणले ग्राहकले परिवर्तनको दिशामा अर्को चरण लिन सक्दैन। नतिजाको रूपमा, यो सधैँ धैर्य छतपाईं को चाँडै त्रुटिहरु को पहिचान को रूप मा र उनलाई शीघ्र तरिका मा ठीक गर्नुहोस।
कसरि ठीक गर्न को लागि 404 नहीं मिला त्रुटिहरु?
जब 404 त्रुटिहरू उत्पन्न हुन्छन्, यो प्रवाहमा फिर्ता लिनका लागि ग्राहकहरूको क्षमताको सुविधा आवश्यक छ।
301 स्थायी रीडायरेक्ट्स प्रयोग गर्नुहोस्
यदि एक विशिष्ट पृष्ठ हटाइएको छ वा सारियो भने,301 पुन: निर्देशित गर्दछ पृष्ठलाई नयाँ एकमा लिंक गर्न मद्दत गर्दछ। 301 पुन: निर्देशितहरू राम्रो छन् किनकि तिनीहरूले अघिल्लो पृष्ठबाट पृष्ठ प्राधिकरण गुमाएनन्।
रोबोट.txt को उपयोग
रोबोट - equipment leasing expert witness.txt फाईल Google बोट्स बताउन प्रयोग गरिन्छविशिष्ट पृष्ठहरू हटाइएका छन् र तपाईं तिनीहरूलाई क्रल गर्न इरादा गर्दैनन्। यो त्रुटि 404 सम्बोधन गर्दा एउटा राम्रो तरिका होपृष्ठहरू हटाइएको छ।
तपाईंको पृष्ठमा मेस्स्पेलिङ सच्याउने
यदि तपाईं वेबमास्टर उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सजिलै पहिचान गर्न सक्नुहुनेछटूटेको लिङ्कहरूसँग पृष्ठहरू। यी पृष्ठहरूलाई नजिकको स्थापना गर्नुहोस् कि लिङ्क गलत तरिकाले हिज्जे वा त्यसलाई तुरुन्तै समाधान गर्न स्थापना गर्नुहोस्।